Vashandisi veLenovo Vachazopedzisira Vavandudza Gnu / Linux Inoenderana Firmware | Linux Vakapindwa muropa
Iko kuvandudzwa kwekuparadzirwa kweGnu / Linux kwakavandudza zvakanyanya mumakore achangopfuura, kusvika padanho rekuti pane zvimwe zvinhu zvinoteedzerwa kana kuendeswa kumashandisirwo eanoshanda Asi, kusiyana neizvi, kupihwa kweGnu / Linux hakuna rutsigiro rwemakambani eHardware, zvinoreva kuti kupararira kwavo kuchiri kudiki kwazvo zvine chekuita nemamwe masisitimu anoshanda.
Neraki, nhanho dzakanaka dziri kutorwa munzira iyoyo uye kuita kuti makambani ehurdware ashande kuburitsa Gnu / Linux software inoenderana, madhiraivha uye firmware. Wokupedzisira kuita izvi ndiye mugadziri Lenovo, iyo yakabatana neLinux Vendor Firmware Service.Linux Vendor Firmware Service iri danho rezvakawanda zveMahara Software mapurojekiti, kusanganisira iyo Gnome chirongwa, icho chinosanganisira kuvhura otomatiki firmware yekuvandudza sevhisi yekombuta. Lenovo ajoina chirongwa ichi, saka mumwedzi yakati wandei, Lenovo makomputa achave akawanda Gnu / Linux anoenderana, zvirinani zvikamu zveLenovo.
Iyi yekuvandudza sevhisi ichave yakabatanidzwa muGnome desktop chitoro uye hazvizokanganisa zvikwata zvemakore apfuura asi zvakare kuzvikwata zvinopfuura makore gumi apfuura, asi haisati yavapo nekuda kwekusimudzira uye kuyedza izvo zvinoreva zvese.
Lenovo yaive yakakurumbira kutanga kwegore rino nekuda kwenyaya idzo vakapa macomputer avo neshanduro yazvino yeUbuntu. Kusvika padanho rekuti Canonical pachayo yaifanira kubvisa iyo vhezheni kubva kumaseva ayo uye nekupa imwe yaienderana neLenovo malaptop. Izvi zvaikonzerwa nekernel yekumisidzana isingaenderane nemamwe Lenovo bios. Iyi yapfuura mvura uye neichi chichava chimwe chinhu icho hazviitike zvakare sezvo iyo firmware ichave yave kuwanikwa kune vanogadzira uye vekupedzisira vashandisi. Inguva dzakanaka nguva dzose kuziva kuti Hardware mugadziri ari kubheja paGnu / Linux, kunyangwe zvaive zviri nani kuti Lenovo ape makomputa neGnu / Linux Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vashandisi veLenovo Vachazopedzisira Vavandudza Gnu / Linux Inoenderana Firmware
Kana ichiti: «Iyi yekuvandudza sevhisi ichabatanidzwa muGnome desktop chitoro», iwe unofungidzira sei maitiro ekuishandisa mu distro, semuenzaniso deepin, inova iyo yandinoshandisa? Parizvino ndine Lenovo G50-70 laptop, ine matambudziko neiyo bluetooh nekuchengetedza simba, pamwe nekuratidzira kernel zvikanganiso.
Ini ndaida kukubvunza nezve kuenderana kweLenovo IP 330 ine 3th gen I7 uye 4 inch 14G ram. Ichaunza chero kusagadzikana kuisa ubuntu?
Iwe haudi kuve nedambudziko neWi-Fi kana mumwe mutyairi. Kune rimwe divi ini ndoda kuisa chete ubuntu pasina kusiya chero chikamu ne windows.
Ndeipi chaiyo Lenovo pc (ideapad) yaunokurudzira kuisa Manjaro?
Chandinotenda ndechekuti zvinyorwa izvi hazvibatsiri kudzamara vaine zuva rekuburitsa, sekunge vairevesa